सुन्‍दरीहरु किन लेख्‍छन्, 'आइएम इन रिलेसनसिप' - Indian Girls Nude XXX Images
सुन्‍दरीहरु किन लेख्‍छन्, ‘आइएम इन रिलेसनसिप’
फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा ‘आई एम इन रिलेसनसिप’ भनेर विवाहपुर्व आफ्नो सम्बन्ध सार्वजनिक गर्ने चलन निकै बढेको छ। कतिपय सेलिब्रेटीले गलत नियत भएका फ्यानबाट बच्न यसो गर्नु परेको बताउँछन तर कसैले आफ्नो सम्बन्धलाई अझ बलियो र सुखद बनाउन सार्वजनिक गर्ने गर्छन्।
स्टाटस राखेको थिएँ
सदिक्षा श्रेष्ठ, पूर्व मिस नेपाल
मिस नेपालमा भाग लिएपछि मैले आइ एम इन रिलेसनसिप भनेर स्टाटस राखेको थिएँ। तर कुनै व्यक्तिसँग नभई प्रतियोगीतासँग सम्बन्धित भएर लेखेको थिएँ। प्रतियोगिता जितेको केही समयपछि हटाइदिएँ।
व्‍यक्तिगत सम्बन्धलाई फेसबुक स्टाटसमा राखेर म प्रचार गर्न चाहन्न। केटाले दुख दिए भनेर मेरो साथी र बहिनीले समेत यस्तो स्टाटस राखेको देखेको छु। दुख दिने खराव मानिस छन् भने सिधै भन्नु राम्रो हुन्छ। नाम जोडिनबाट बचिन्‍छ
मैले निजी सम्‍बन्धलाई फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको छैन्। व्‍यावसायिक जीवनका कामलाई मात्रै फेसबुकमा राख्‍ने गरेको छु। कुनै व्‍यक्ति पहिले मानव हो, त्‍यसपछि मात्रै सेलिब्रेटी।
कला क्षेत्रमा थुप्रै व्‍यक्तिसँग काम गर्नुपर्ने हुनाले सञ्‍चारमाध्‍यमले अरुसँग अरुसँग नाम जोडिन्‍छ। यसबाट बच्‍न कतिपय सेलिब्रेटीले सम्‍बन्‍ध भए पनि नभएपनि फेसबुकमा यस्तो पोस्‍ट् गर्ने गरेका छन्। सुरक्षित महसुस भएको छ
पुजना स्त्री (प्रधान)
गत शनिबार मैले आइ एम इन रिलेसनसिप भनेर फेसबुकमा पोस्ट गरें। कसैसँग प्रेम भएर यो स्टाटस पोस्ट गरेको चाहिँ होइन। संधै प्रेम प्रस्ताव राख्ने, विवाह गरौं भन्नेले हैरान बनाएकाले हो। अहिले मलाई सेफ फिल भएको छ। तर धेरैजनाले इनबक्स म्यासेजमा को हो, कहिले देखी हो भनेर सोधीरहेका छन। अझ रमाइलो कुरा त धेरैले नायक, मोडेलसँग चाहिँ विवाह नगर्नुहोला भनेर सुझाव दिएका छन। सम्बन्धमा सन्तुष्टी जनाउन
करुणा कुवर, मनोविद
विभिन्‍न सेलिब्रेटीले आफ्नो ब्यक्तिगत घेरालाई सुरक्षित राख्न आफू कसैसँग सम्बन्धमा छु भनेर फेसबुकमा राख्ने गर्छन। समाजमा गलत नियत भएका ब्यक्तिसँग बच्न कतिपय कलाकारले यस्तो गर्छन भने कसैले आफ्नो अधिकारका रुपमा प्रयोग गर्छन। कुनै ब्यक्ति आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर खुसी र सन्तुष्ट छ भने यसलाई किन आफूभित्र मात्रै सिमित राख्ने भनेर खुलाउन फेसबुकलगाउत सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्छन्। अर्कोकुरा नेपाली समाजमा कसैको कोही ब्यक्तिसँग सम्बन्ध छैन भने उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। कुनै महिल कसैसँग प्रेम वा वैवाहिक सम्बन्धमा छिन् भने उनलाई हेर्ने नजर फरक हुन्छ। दुख दिएको छैन
मलिना जोशी, पूर्व मिस नेपाल
आफ्नो नीजि सम्बन्ध बारे फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट के सोचले गर्छन मलाई थाहा छैन। फेसबुकमा राख्दैमा कुनै सम्बन्ध राम्रो वा नराख्दैमा नराम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै केटासँग प्रेम सम्बन्धमा छु भनेर अहिलेसम्म मैले सामाजिक सञ्जालमा राखेको पनि छैन। कसैले दुख दियो भनेर सेलिब्रेटीले नभएको सम्बन्धको प्रचार गर्छन होला, त्यो उहाँहरुको सोचमा भर पर्ने कुरा हो। मलाई कसैले दुख दिएको पनि छैन। मुख छाड्नु पर्ने हुन्छ
हर्षिका श्रेष्ठ, नायिका
फेसबुकले सबै जनासँग लिंक गराउने भएकाले सुखदुख बाढ्ने ठाउँ बनेको छ। कुनै पनि व्यत्तिले आफ्नो इच्छानुसार फोटो र स्टाटस सेयर गर्न पाउँछ। कसैसँगको सम्बन्ध नीजि भएकाले फेसबुकमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। म प्रेममा छु भनेर अहिलेसम्म फेसबुकमा राखेको पनि छैन। तर फेसबुक अनलाइनमा हुँदा धेरैले म्यासेज पठाउँछ। कतिपय त दुख दिने नियतका हुने भएकाले मुखै छाड्नु पर्ने हुन्छ। Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)
← महिनाबारी भएको कति दिनमा बच्चा बस्छ?	श्रीमान् श्रीमती टाढा हुँदा कसरी यौन चाहना पुरा गर्ने ? →